Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Gunyana 06, 2017
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti manyepo ekuti bato iri riri kuita hurukuro muchivande nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamusoro pemamiriro enyika mune remangwana kana VaMugabe vasisipo.
Mutungamiri weZimbabwe People First, VaAgrippa Mutambara, vanoti vakarwa muhondo yerusununguko pamwe nemamwe mapato anopikisa vanofanirwa kupinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa we MDC Alliance kuitira kuti vakunde Zanu PF zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya.
Sangano reUnited Nations rinoti richapa Zimbabwe Electoral Commission mari yekuti nyanzvi dzichengetedze mashoko ane chekuita nesarudzo kuitira kuti pasave nemutauro.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotambira nemufaro mashoko aburitswa nehurumende yenyika iyi pamusoro pehurongwa hwekupa magwaro matsva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa uho huchaziviswa nemusi weChishanu.
Muchirongwa che LiveTalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa nemusi weChishanu apo hurumende yaVa Jacob Zuma ichaburitsa hwaro huchashandiswa mukupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro matsva ekugara munyika iyi.